🌲 Nature Reserve | Gaa na Hultsfred
Otu na ọdịdị!
Nweta anwansi Småland ọdịdị kacha maa mma. Ọhịa mara mma nke a na-ahapụbeghị kemgbe ọgbọ, ọdọ mmiri na-egbuke egbuke na nnukwu, nkume kpuchie akpa. Niile bara ọgaranya ma osisi na anụmanụ. You mara na e nwere ihe ruru 11 okike na-agaghị agabiga n’obodo anyị?
🖼️ Ụlọ ihe ngosi nka na ihe ngosi
Knästorps na-echekwa ọdịdị
Ebe nchekwa okike Knästorps bụ mpaghara dịgasị iche iche nwere ọtụtụ ebe obibi dị iche iche dịka oke ohia dịka ọhịa agwakọtara, ọhịa oak, ahịhịa pine a na-acha ọkụ ọkụ, ahịhịa na-emeghe na mmiri mmiri. Knästorps idobere okike nwere foduru nke obodo narị afọ nke 1700
Lunden ọdịdị idobere
Lunden nature reserve - a mpempe Småland Nature mgbe ọ bụ na ya kasị mma. Lunden ọdịdị idobere bụ ogologo na ndị mara mma obere okwute riiji. Ugwu bụ otu
Ebe nchekwa agwa Slagdala
A na-ahụta nchekwa nchekwa okike Slagdala, nke bụ akụkụ nke ugwu Virserum, dị ka otu n'ime usoro mkpuchi ugwu kachasị ike nke ndịda Sweden. Mgbe akpụrụ akpụ laghachiri azụ n'ihe dịka afọ 10 gara aga
Hulingsryd dị na mgbago ugwu Ọdọ Mmiri Hulingen ma na-enyekwa gburugburu osimiri gbara agba, ahịhịa ndị dị n'akụkụ oke osimiri, oke ọhịa pine, ala ịta ahịhịa na ala ahịhịa mmiri. Akụkụ buru ibu dị taa
Länsmansgårdsängen ọdịdị idobere
Länsmansgårdsängen ọdịdị idobere bụ ebe ama ama na -aga ije n’akụkụ Virserumssjön ma nwee ọtụtụ ochie na mma lindens. Na mpaghara ruo ọdọ, birch ọkọride na ọcha nke
Ebe nchekwa Kraskögle
Na Kraskögle, a na-emebeghị ọhịa ahụ kemgbe ọtụtụ ọgbọ. Ala ahụ bụ akara nke agbaze nke mpempe akwụkwọ ice. Ohia okike nke ụdị na nha a dị iche na ya
Ebe nchekwa Grönudde
Mpaghara Grönudde niile nwere àgwà ọhịa, ya bụ, ọhịa oge ochie yiri ya. Ọhịa dị n'ógbè ahụ nwere oke ọhịa hethy pine na ochie coniferous ọhịa agwakọtara nke spruce na-achị.
Sällevadsån ndagwurugwu idobere
Na ndagwurugwu Sällevadsån na-ebi ụfọdụ n'ime anụmanụ na osisi dị egwu nke Sweden. Sällevadsån bụ akụkụ nke usoro mmiri Emån. Mmiri ọsọ ọsọ pụtara na enwere mmiri na-emeghe
Stensryd ọdịdị idobere
Stensryd bụ ebe nchekwa nke nwere oke ọhịa dị ka ọhịa na mosaics. Ebe nchekwa ahụ nwere oke ọhịa Hällmark pine na-adịghị ala ala, ahịhịa na-adịghị mma mepere emepe, ọhịa apiti na osisi pine. Ohia pere mpe ma nwee otu
Ọdịdị nke Björnnäset
A ezigbo anwansi ọhịa na osisi pine ochie na-eguzo gburugburu okwute ndị kpuchiri osisi lichen. Ebe nchekwa Björnnäset dị na isi ala na Åkebosjön. Ebe nchekwa ahụ dị